Lix Qof oo kudhintay Dagaal ka dhacay Kismaayo
Guddoomiyaha Baarlamaanka KMG oo warqad ka helay Ingiriiska
Xuseen Caydiid oo la kulmay Safiirka Jarmalka u fadhiya Kenya
Wasiirka Arimaha Gudaha Soomaaliya Ahna Raysulwasaare ku xigeen Eng Xuseen Maxamed Faarax Caydiid, ayaa Galabta la kulmay Safiirka Jarmalka
Warmurtiyeed laga soo saaray shirkii abuja ee AU-da oo soomaaliya ciidan loogu ogolaaday.
canabmumtaz@hotmail.com | Feb 3, 2005
Wadamada ku bahoobay IGAD oo ay Soomaaliya ku jirto kana qaybgalayay kulankii Abuuja ee madaxda ururka midnimad afrika ayaa soo saaray warmurtiyeed aad u dheeraa oo looga hadlayay xaaladda soomaaliya iyo sidii loo taaba galin lahaa dowladii lagu dhisay dalka kenya oo ay soo qaban qaabiyeen wadamada IGAD.
Warmurtiyeedkan oo aad u dheeraa nuxur ahaan marka la soo koobo waxa uu ka hadlayay sida ay dowadda FKMG ahi ugu baahan tahay ciidan suga amniga dalka inta ay dowladdu ka noqonayso mid xoogan amaanka dalkana hanan karta. waxaana ka mid ahaa qodobadan.
1.Inay jirto baahi degdeg ah si ammaanka loo sugo oo gacan loogu siiyo dowladda federal-ka ku-meel-gaarka Soomaaliyeed (DFKMGS) inay si sugan dib ugu degto Soomaaliya, isla markaasna si taabbo gal ah loo dhaqan geliyo waxyaabihii ka soo baxay hannaankii nabadayntii IGAD .
2-Djibouti, Itoobiya, Kenya, Suudaan, iyo Uganda,waxay si dhab ah gacan uga qayb qaadanayaan howl-galka lagu gacan siinayo nabadaynta iyagoo keenaya ciidamo iyo/ama qalab.
3-Waxaa la farayaa Xog-haynta IGAD iyadoo kaashanaysa Midowga-Afrika inay keento dhaqaale lagu daboolayo kharajka lagu caawinayo howl-galka nabadeynta.
4-Waxaa la farayaa wasiirada gaashaan-dhigga iyo Taliyeyaasha ciidammada inay si degdegah u kulmaan isla markaasna go'aamiyaan iyagoo la tashanaya DFKMGS kalana xaajoodaan oo isku raacaan si tafaftiran qaababka ciidammadaas loo geynayo Soomaaliya.
5-Waxaa awood loo siiyay Guddoomiyaha IGAD ee hadda xilka haya inuu u howl galo wadammada gobolka,dowladaha xubnaha ka ah Midowga Afrika iyo beesha caalamka inay xaqiijiyaan sidii loo heli lahaa ciidan, dhaqaale, iyo farsamo kasta oo gacan lagu siin karo howl lagu caawinayo nabadaynta.
6-Waxaa laga codsanayaa dowladaha xubnaha ka ah Midowga-Afrika inay iyagan awood u siiyaan in la geeyo ciidammo gacan ka gaysta howl-galka nabadaynta Soomaaliya i slamarkaasna muujiyaan rajadooda ku aaddan sidii ay Qarramada midoobay u meel marrin lahaayeen.
Ciidamadan waxaa laga kala keenayaa dhamaan wadamada IGAD ku jira waxaana loo xilsaaray in xoogga saaro arrintan Madaxweynaha Ugandha isagoo isku duba ridi doona waxii qarash ah ee ay u aaahan yihiin iyo sida loo habaynayo ciidamadaas ay IGAD ugu yaboohayso dowladda Somaliya.
Wadamada IGAD ee gacanta ku hayay shirka somalida uga socday labadii sano ee la soo dhaafay dalka kenya waxay balan qaadayaan sida ay hadalka u dhigeen in taaba gal ka dhigi doonaan waxqabdkan dowladan iyagoo ka caawin doona dhinacyadda amaanka xagga dhaqalahana u waydiin doona wadamada deeqaha bixiya in aysan somaliya ka qasaarin shirkii la soo waday labadii sano ee tagtay.
Waxaa la filayaa waxa ka dhaqan gala qorshaha cusub ee ay IGAD wado kuna aadan ciidanka soomaaliya habkii ay dowladda u maarayn lahayd iyo sidii qaybaha diidan hadiii ay IGAD keenaan ciidamaas ugala xaajoon lahayd waxaana socda hadda wadahadal ku aadan sidii ay dowladdu uga midaysmi lahayd howlgalinta ciidaamadaas.
Lix qof ayaa dhimatay, ku dhawaad kow iyo toban qofna way ku dhaawacmeen, dagaal qaraar oo saakay ka dhacay isgooska somali star ee magaalada kismaayo, dagaalkan oo u dhaxeeyay isbahaysiga dooxaga juba iyo kooxda la magac baxaday golaha nabadgalyada iyo midnimada qaranka.
Dagaalkan qaraar ee sakay dhexmaray ciidamada isbahaysiga dooxada jubba iyo ciidamada golaha nabad galyada iyo midnimada qaranka ayaa waxa uu bilowday abaare afartii saac oo rubi dhiman ee subaxnimo ayadoo dagaalkan uu ka bilowday isgooska somali star ee xaafada calanleey, la isuna adeegsaday dagaalkan hubka noocyadiisa kala duwan.
Dagaalkan ayaa dadka ku dhintay waxa ay gaarayaan lix qof ayadoo dhaawacuna uu ahaa kow iyo toban qof isla markaana ay dadka dhintay ay ka kala tirsanaayeen labada garab ee halkaasi ku hardamaysay ayadoo sidoo kale ay jiraan dad rayid ah oo ay wax yeelo ka soo gaartay daagaalka.
Dagaalkan saaka dhexmaray ciidamada isbahasiga dooxada jubba iyo ciidanka golaha nabadgalyada iyo midnimada qaranka ayaa waxa uu dhashay kadib markii rasaas lagu furay gawaari kolonyo ah oo tikniko ah oo markaasi waardiyaynaysay gudoomiyaha isbahasiga dooxada jubba Col. Barre Hiiraale ayadoo halkaasi ay ka bilaabatay iswaydaarsiga raasta islamarkaana la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kal duwan.
Hadaba dadkii ku soo dhaawacmay dagaalkaasi ayaa waxaa la keenay isbitaalka guud ee magaalda kismaayo ayadoo halkaasi lagu dawaynayo xaaladooda caafimaad .
Ma jiraan ilaa iyo iminka cid kala dhex gashay labadaasi maleeshiyo ee ku dagaalamaysa bartanaha magaalada kismaayo ayadoo ay rasaastu socotay waqti ka badan lix-saac islamarkaana ay wali is horfadhiyaan maleeshiyooyinkii halkaasi ku dagaalamay.
Sidoo kale waxaa laga dareemayaa wali magaalada kismaayo abaabul xoogan oo ay wadaan labada garab ee dagaalamaya ayadoo isbahaysigu uu soo hub aruursanayo sidoo kale ciidanka kalana la sheegayo in uu gurmad oga imaanayo deegaanka saldhiga u ah ee beerxaani.
Waxaa maanta magaalada Nairobi ee Dalka Kenya ku kulmay Raysul wasaare ku xigeenka ahna Wasiirka Arimaha Gudaha Eng Xussen Maxamed Faarax Caydiid iyo Safiirka Jarmalka ee wadanka Kenya, Bernd Braun.
Waxa kulanka Xaadir ku ahaa Xoog hayaha koowad ee Arimaha Siyaasada Wadanka Jarmalka ee Soomaaliya Lorenz Barth iyo la taliyaha xaga Arimaha Soomaaliya ee Wadanka Jarmalka & Xariiriyaha Labada Dal Ibraahin Cali Xasan.
Waxaa kulankaa ka hadlay Wasiirka Arimaha Gudaha Soomaaliya Eng Xuseen Maxamed Faarax Caydiid, oo isagu ku dheeraaday Xiriirka Saxiibtinimo ee Labada Dal waa Soomaaliya iyo Jarmalka'e isaga oo xusay taariikhda qotada dheer ee labada Qoowmiyadood.
Wasiirka Arimaha Gudaha Soomaaliya Eng Xuseen Maxamed Faarax Caydiid, oo sii hadlay waxa u sheegay in Doowlada Soomaaliya ee ugubka ah uga baahantahay Gargaar dhinacyo badan isagoo walibana xusay in isaga oo ku hadlaya Magaca Doowlada Federaalka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya Wadanka Jarmalka uga mahad celinayo Deeqdii ay ugu deeqeen Umada Soomaaliyeed Xiligii Sunaamiga,
Wadanka Jarmalku Fatahaadii Badaha Soomaaliya waxa uu ku deeqay 500,000 oo Uuro isaga oo sii marsiiyay WFB ,
Waxa isaguna halkaa ka hadlay Safiirka Jarmalka oo sheegay in Wadankoodu uusan marna ilaawi doonin Soomaaliya isaga oo xusay in Doowladiisu horay u sii anba qaadi doonto wax ka qabashada Dhibaatooyinka Dhaqaalle,Caafimaad,Waxbarasho, mid nololeed iyo mid siyaasadeedba,
Kulankan waxa uu ku dhamaaday guul& is afgarad Buuxa iyadoo ay labada dhinacba balan qaadeen in ay dhinacooda ka dadaali doonaan
Guddoomiyaha Baarlamaanka Fedaraalka Ku meel gaarka Soomaaliyeed warqad ka helay afhayeenka aqalka loo dhan yahay ee Ingiriiska Hor.Micheal J.Martin Mp,
Warqadaas oo ku saabsaneyd murugada ay aqalka loodhan yahay ee dalka Boqortooyada Ingiriiska ay uga xunyihin waxyeeladii dadka Soomaaliyeed ka soo gaartay dhibaatadii Tsunami ee gobalada qaarkood waxyeeleysay.
Af-hayeenka baarlamaanka Ingiriiska waxa uu warqadiisa ku xusay xiriirka soo jireenka ee waligood ka dhaxeeyay Soomaaliya iyo Ingiriiska,waxa uu dadweynaha soomaaliyeed u rajeeyay in ay si dhaqso leh uga soo kabtaan dhibaatadaas intii dhimatayna samir iyo iimaan ,intii waxyeelada ama dhaawacana ilaah ka bogsiiyo.
Warqada waxaa soo gaarsiiyay Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliyeed waxaa warqada soo gaarsiiyay Ergayga gaarah ee dowlada boqortooyada Ingiriiska Mr Devid Bell.
Guddoomiyaha baarlamaanka fedaraalka KMG ee Soomaaliya ayaa isna sida maanta laga soo xigtay xafiiska guddoomiyaha diray warqad jawaab celin ah oo Af-hayeenka baarlamaanka Ingiriiska loo mahadcelinaayo warqadii uu ummada Soomaaliyeed ula mirugoonaayay dhibaatadii ka soo gaartay Tsunami.
Guddoomiyahawaxa uu ka dalbaday Af-hayeenka in uu kaalin ka qaato nabadeyta ,dib u dhiska dalka iyo soo celinta xiriirkii saaxibnitimo ee waligood ka dhexeeyay Soomaaliya iyo Ingiriiska,gaar ahaan xiriirkii labada Baarlamaan ee Soomaaliya iyo kan Ingiriiska..